China pp mitafo fanamboarana mpanamboatra sy mpamatsy | Sihai
Ny karatra antsy tabilao pp dia vita amin'ny tabilao poakaty ho an'ny tontolo iainana PP, ary avy eo manenjika na manaparitaka ny endrika andrasana, ary avy eo atambatra tsirairay avy. Afaka manakana tsara ny famokarana herinaratra tsy miovaova izany, veloma tanteraka. ny fanesorana ny volo vita amin'ny taratasy nentim-paharazana, fanalefahana ary olana hafa, fivadihan'ny vokatra, fiarovana tonga lafatra, fandefasana, fanasokajiana ny vokatra, fitehirizana vokatra, fanasokajiana ireo vokatra sns.
Fampiharana ny fizarazaran'i pp
Kosmetika, telefaona finday, faritra misy fizaran-tany, vokatra elektronika, faritra an-telefaona, faritra finday, faritra iPhone, ampahany amin'ny solo-sainanao sy ny vokatra hafa, ny fandefasana, ny fitehirizana ary ny trano fitobiana. Ny fonosana amin'ny faritra misy azy, vokatra elektronika, fitaovana ao an-trano.
Ny pp Hollow sheet divider araka ny vokatra isan-karazany dia afaka manao ESD partition, ESD divider, conductive partition, foma partition, pp hollow sheet partiton, pp hollow sheet partition with EVA, EVA partiton, anti-static EVA partiton, ESD EVA partition, hot welding boaty divider, partiton miempo mafana.
Previous: pp ravina miaro gorodona
Manaraka: pp ravina, ravina mihosona